'विजयजी तपाईँका कथा राम्रा लागे, अब एऊटा संग्रह नै निकाल्नुस ।' vcp-510 exam नारायणदाइले भन्नुभयो । मेरा कथा निरन्तर उहाँले छाप्दै आउनुभएको थियो, अनलाइन पत्रिकामा । तर कति नेपाली त्यसको पहुँचमा थिए र! सरकारले घर घरमा ईन्टरनेट भनि ल्याएको प्रचार मीठो हल्ला मात्रै भएको थियो ।
मैले कुनै जवाफ दिइनं । हाम्रो परिचय फेसबुक Microsoft 70-410 dumps भित्तोबाट बाहिर थिएन । अस्थाई मास्टरीले दाल भात हम्मे पुग्थ्यो, तरकारी कहिलेकाहिँ जुरि पनि दिन्थ्यो । त्यसकारण आफू बाँच्न र अर्को ज्यानलाई बचाउन खिइनु बाहेक ISC CISSP exam dumps यस्ता फाल्तु कुरामा लाग्ने साहस ममा थिएन । बरु मोबाइलबाटै ईन्टरनेट चलाएर कथा, मुक्तक, गजल लेख्न पाउँदा म लाख पाएको ठान्थेँ ।
खै कसो कसो नारायणदाइले एऊटा प्रकाशकलाई चित्त बुझाउनु भएछ Swarovski Pendants र मरो फन्को नामको लघुकथा सङ्ग्रह छापिने लगभग तय भयो । यो खबर सुनेर अन्धोले दुई आँखा पाएको खुशी जाग्यो र लोकल ठर्रा र ब्रोइलरको भोज खुवाए साथीभाइलाई बजेट बिगारेर । नारायण दाइले पाउनु भो धन्यबाद मात्र ।
भोलिपल्ट नै आफ्नो फेसबुकमा लेखिहालेँ, 'मेरो किताब झट्टै आऊँदैछ!' खासै लाइक र कमेन्ट आएनन् । पन्ध्र चौधवटा जति कमेन्ट थिए । एकजनाले खुब चाख राखेर खोजखबर गर्नुभयो । Swarovski Rings ती क्याजुअल फेसबुक फ्रेन्ड मात्र थिए ।
तिनले धेरै मेहनत नगर्दै मैले खुस्काइदिएँ, फलाना प्रकाशनबाट मेरो किताब छापिदैछ ।
धेरै पछि पनि मलाई प्रकाशकले सोधखोज गरेनन् । मैले नै कहिले छापिन्छ CompTIA 220-802 भनेर जानकारी मागें । फोनले बोल्यो, 'तपाईँको पुस्तक त नछापिने भो । चन्द्र गिरीले सारै गर्नु'भो र तपाईँलाई छुट्टाएको बजेट उहाँको भागमा पुग्यो । सरी....' उनले थप के भने मैले केहि सुनिनं ।
चन्द्र गिरी तिनै थिए, जसलाई मैले प्रकाशकको नाम चुहाएको थिएँ।